Etu esi esochi ntụgharị gị na ire ahịa gị na Email Marketing | Martech Zone
Marketingre ahịa email dị oke mkpa na itinye ego ntụgharị dịka ọ dịbu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ka na-emezughị arụmọrụ ha n'ụzọ bara uru.
Ọnọdụ ahịa ahịa ahụ amalitela na ngwa ngwa na 21st Century, mana n'oge ịrị elu nke mgbasa ozi mmekọrịta, SEO, na ọdịnaya ọdịnaya, mkpọsa email na-anọgide na-abụkarị nri nri. N'ezie, 73% nke ndị ahịa ka na-ele ahia email dika uzo kacha di nma nke isi gbanwee ntaneti.
Isi Ihe Oyiyi: AeroLeads
Ọ bụ ezie na iji saịtị ịkparịta ụka n'socialntanet nwere ike ịbụ ụzọ dị ike iji mepụta mmata ka ukwuu, usoro mgbasa ozi dabere na email nwere ike inye ndị azụmaahịa ohere ịgbaso na ịmepụta iguzosi ike n'ihe n'etiti ndu na mmetụta nke ahaziri iche. Mgbasa ozi email nwere ike ịbụ kwaaji maka igosipụta nlekọta, omume mmadụ karịa n'etiti azụmaahịa nke nwere ike ibute oke ngbanwe dị elu.
-adịbeghị anya tụlee na organic iru nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi emeela ka ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi email maka ndị ahịa kwalite. Site na ịpụta kpọmkwem n'ihu ndị nnata n'ime igbe mbata ha, ịre ahịa email nwere ike ịme mmekọrịta siri ike n'etiti ụdị na ndị ahịa ha. Mmetụta a nke ịbụ ndị otu azụmaahịa ji kpọrọ ihe na-eduga n'ịchọ mkpali ha chọrọ iji zụta ihe na saịtị.
Ezie na enwere obere obi abụọ ịdị ire ahịa email, ọ dị oke mkpa na azụmaahịa na-eji ike email eme ihe n'ụzọ ga-erute ọtụtụ ndị ahịa. N'iburu nke a n'uche, ọ bara uru ileba anya na ụfọdụ usoro kachasị baa uru nke ndị ahịa nwere ike soro ntụgharị email na gbanwee atụmatụ ha dị ka ahịa.
Art nke Ndepụta Email tọghatara
Mgbasa ozi email dị ntakịrị ma ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa anaghị esochi mgbanwe ndị ha na-eme. Ihe dị iche na ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha ndị edepụtara na listi nzipu ozi gị ga-apụta obere ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ka onye ọ bụla soro mmasị ha na ịzụta.
Iji mee ka gị ozi ịre ahịa email na-amị mkpụrụ, ọ dị mkpa na ị na-ahu nagide ụfọdụ nke akụ na ụba nke nghọta ịghọta dị ka. Splitrụ nyocha nkewa iji bido ụfọdụ nnwale na nkwalite maka usoro gị nwekwara ike ịdị oke irè. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịwube mkpọsa dabara maka ụlọ ahịa azụmaahịa gị dị ugbu a, a ga-eme ka ọnụ ahịa ọdịda daa doo anya.
Ọ dabara nke ọma, enwere ọtụtụ ọrụ dị elu na aka iji mee ka usoro ịnweta nghọta email dị mfe karị. Ihe ntanetị dị ka MailChimp na Kọntaktị Kọntaktị bụ ndị maara nke ọma na igosipụta usoro ndị ahịa nwere ike iwulite na - dị ka ọnụọgụ email na-emeghe ọnụego, pịa-site na nghọta dị iche iche banyere omume nke ndị nnata nke mkpọsa gị. Nghọta ndị a nwere ike inyere gị aka ịchọpụta nsogbu dị na mkpọsa gị ngwa ngwa n’ebughị oke ego n’ahịa azụmaahịa gị.
Isi Ihe Oyiyi: Ndụmọdụ Sọftụwia
Ọ bụ ezie na ịhazi ntọala nyiwe nyocha nke email nwere ike iwepụ ego gị, ọtụtụ nghọta nke usoro metrics nwere ike ịgwa gị ga-eme ka mkpọsa gị ka mma maka ndị na-ege ntị ziri ezi na-aga n'ihu.
Ike nke ịrụ ọrụ ịrụ ọrụ
O doro anya na ihe kachasị mkpa maka ndị na-ere ahịa ka emejupụtara bụ nke a maara dị ka 'karịa ntinye nsuso,' usoro nke na-enyocha ụzọ ndị ọrụ na-ewe ozugbo ha rutere na webụsaịtị gị site na njikọ email agbakwunyere.
Ọ gafere nchịkọta nsuso na ị nwere ike nyochaa ọganihu nke ndị ọrụ site na peeji nke ahaziri ahaziri iji nabata ozi ịntanetị.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-ezube iji chọpụta ogo nke mkpọsa ya, ọ dị mkpa ịme nyocha zuru oke tupu ị were ọrụ email. Nke a ga - enyere gị aka ilele ọkwa ịpịrị pịa ihe ha na - enye. N'ụzọ dị oke mkpa, ihe ndị dị ka nsuso ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ, isi ihe ntụgharị, na ịkpado akpaghị aka nke mkpọsa ozi-e dị oke mkpa maka ịnye ndị ahịa ahịa akụ kacha mma. ntughari ntughari.
Enwere ike ịchọta ụfọdụ nyiwe ndị ezi uche dị na ha maka azụmaahịa iji soro usoro mbata ha na isi mmalite ndị nwere mmasị Google Analytics na Finteza - ha abụọ na-elekwasị anya na ma okporo ụzọ ma Ntọala UTM.
Isi Ihe Oyiyi: Finteza
Ọrụ Nchịkọta N'ime Email Marketing
Onwere ihe omuma ndi ozo di nma kari ichota ahia email karia Google Analytics. Ikpo okwu nwere ike ilekwasị anya na arụmọrụ email gị site na guzosie ike omenala elu agba nke ahụ nwere ike ịgbaso ndị ọbịa site na njikọ email iji chọpụta otu ndị na-ege ntị si akpa agwa.
N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ nchịkọta dashboard n'ime nchịkọta Google. Iji mepụta otu maka mgbasa ozi ịre ahịa email n'ime ikpo okwu, ị ga-ahọrọ ya Ndi mmadu Nhọrọ na dashboard. A ga - ewetara gị nhọrọ iji mepụta ndị na - ege ntị ọhụụ mgbe ị na - ahọrọ ịbịaru mbata email.
Ga-enwe ike itinye ọnọdụ ụfọdụ na ngalaba ndị ị mepụtara, na nchịkọta ga-enye pasent nke ogo ndị ọbịa gị nke ị ga-ejikwa oke n'akụkụ ntọala gị.
Ndenye na Mkpado Njikọ Email
Akụkụ dị oke mkpa ahịa email na-abịa n'ụdị ịmepụta usoro nyocha iji nyere gị aka ịmata nke mkpọsa na-eme mma karịa ndị ọzọ.
Iji nyochaa nke ọma mkpọsa ozi email gị, njikọta agbakwunyere n'ime ozi ịntanetị gị kwesịrị iduzi ndị ọrụ ka ha daa peeji ndị akpadoro na nsuso nsuso. Dịka ụdị ụdị ahụ ga-agụnye usoro nke ụzọ abụọ 'bara uru' maka mkpa njirimara. Ha na-atughari aka na ederede obula nke soro '?' n'ime URL weebụsaịtị.
Isi Iyi: Hallam Intanet
N'elu, anyị nwere ike ịhụ usoro ihe atụ na-ezo aka etu mkpado nwere ike isi rụọ ọrụ n'ihe metụtara adreesị URL dị iche iche. Naanị ma ọ bụrụ na ị nọ na-eche ugboro ole ọ ga-eme ọ bụ na-egosi na ihe atụ ndị dị n’elu, ọ bụ ndebiri nke Urchin Ndepụta Module.
Ọ bụrụ n’ịnabata Google Analytics dị ka ebe ikpo okwu ị na-ahọrọ maka ịlele mbọ ị na-agba n’ozi email, gbaa mbọ mara nke ọma Martech ZoneNchịkọta Mgbasa Ozi Google Analytics nke ahụ na-enyere ndị ahịa ahịa aka ịgbakwunye oke maka peeji nke akọwapụtara sitere na mkpọsa ozi email dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị na-achọ iwu akwụkwọ akụkọ a na-ezipụ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa, ọ nwere ike ịba uru ịde edemede nke na -emepụta peeji HTML yana njikọ ejiri ngwa ngwa tinye maka ịdị mfe nke ntụle. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ email (ESP) nye mgbakwunye nsuso UTM nke ị nwere ike ime ma rụọkwa ọrụ.
Ghọta Àgwà Ndị Ahịa
Cheta na ọ bara uru mgbe niile ịme nyocha n'ime usoro atụmatụ nke ngwanrọ nsuso ngwanrọ na-enye tupu iwere na ịzụta n'ime ikpo okwu maka azụmahịa gị. Mee elu mee ala, ịzụrụ ihe na-egbochighị gị mkpa gị nwere ike ime ka ị ghara ịfu ego.
Kama nanị ileba anya na ọnụọgụ email na pịa-site na metrics, ndị na-ere ahịa kwesịrị ileba anya na ntụgharị ha, nke nwere ike ịba uru na nghọta ezigbo ROI jikọtara na usoro azịza email.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ data dị na ebe ahụ na-enyere ndị azụmaahịa aka ịlele ole ndị debanyere aha na-enye nsogbu ịgụ ozi email e zigara ha, yana ndị nnata na-ahọrọ ịga na weebụsaịtị mgbe ozi email batara na igbe nnabata ha, ọtụtụ n'ime usoro ndị a enweghị ike ịnye ọnụọgụ data nke ndị ahịa chọrọ iji chọpụta nke ọma etu ndị ọrụ si emeghachi omume na mkpọsa ha hụrụ belụsọ na omume ha nọ na saịtị bụ dị maka ọmụmụ ihe.
Iji kọwaa nke a nke ọma, pịa-site-ọnụego nwere ike igosi na onye nnata dị njikere imeghe email site na ụlọ ọrụ gị. Mana ọbụlagodi na a na-arụ ọrụ njikọ n'ọtụtụ ikpe, ọ pụtaghị na ọ ga-eme ka mgbanwe ndị ọzọ gbanwee. N'ezie, enwere ohere ọ bụla na ọtụtụ mpịpị na-eme na mgbalị zuru ezu maka ndị debanyere aha wepu aha site na nzipu ozi ndepụta.
Learningmụtakwu banyere omume nke ndị debanyere aha dị oké mkpa n'inweta nkọwa zuru ezu banyere otú mkpụrụ mgbasa ozi gị si amịpụta n'ezie.
Isi Ihe Oyiyi: mgbasa Ozi Nyochaa
Mgbasa Ozi Mgbasa ozi amalitewo ịmalite ntinye-na-emeghe (CTOR), nke na-enwu enwu na nghọta nke azụmahịa nwere ike inweta n'ime arụmọrụ nke mkpọsa ya.
Email marketing na ọdịnaya na-agakarị aka na aka, ọ na-abụkarị ọtụtụ ọrụ ọ dị mkpa ka a rụọ n'etiti inwe ndị ahịa nwere ike igosi ịdị njikere ịgụ ozi ịntanetị gị wee jiri zụọ ihe. Ọdịnaya na-enyere aka iwulite mmekọrịta dị n'etiti azụmaahịa na ndị ahịa ha, ọ dịkwa mkpa na ndị ahịa anaghị eleghara anya ntinye uru n'etiti usoro metara na-akọwa ụzọ dịkarịsịrị irè nke ọfụma ahịa.
Ofwa nke ịzụ ahịa aghọwo asọmpi na teknụzụ dị elu karịa ka ọ dị na mbụ. N'etiti ọhụụ, nghọta dị omimi karị, ịre ahịa email emeela ochie ka na-abụ ikike na-agaghị agbanwe agbanwe n'oge niile. Site na ngwakọta nke nyocha, itinye ego na itinye ozi, ndị na-ere ahịa nwere ikike ịchekwa ego ma na-eme ka ikike ha nwere maka ọganiihu. Naanị ihe ha kwesịrị ime bụ ịma otú ha ga-esi tụlee ozi ndị ahịa ha na-enye ha.
Tags: mgbasa Ozi Nyochaamkpọsa urlpịa ọnụegopịa-na-emeghe ọnụegonjikarịcha ntụgharịihe ndoziemail kiririemail mkpọsa ọdịnayaaha mkpọsa ozi emailemail mkpọsa isi iyiemail mkpọsa okwuemail pịa-site ọnụegoọnụego mgbanwe emailntughari emailemail ctremail ahịa kiririemail ahịa nloghachi na egoemail ahịa roiemail emeghe ọnụegoozi emailemail nkewaemail nsuso njikọemail wepu aha yafintezanchịkọta Google googleNchịkọta UTM Mgbasa Ozi Google AnalyticsHostgatoresi koodu email njikọotu esi esochi mgbanwe emailesi soro ahịa emailmailchimpemeghe ọnụegolaghachi na ntinye ego ahiasemrushndụmọdụ ngwanrọsoro ntughari emailurchin nsuso modulutm ajụjụutm trackerutm nsochiutm_campaignutm_contentutm_mediumutm_sourceutm_term
Jun 10, 2021 na 4:36 AM
Chọpụta na nyochaa arụmọrụ ịre ahịa email gị bụ ụzọ kachasị mma iji mata ndị na-ege ntị, na-ewukwasị ihe na-arụ ọrụ, wepu ihe anaghị arụ ọrụ, ma nwee usoro kachasị mma ọ nwere ike ịbụ. Enwere m mmasị n'ụzọ ị si eweta ozi n'isiokwu a, ndị na-ege ntị ga-abịa ma gụọ nke a ga-erite uru site na nke a, ejiri m n'aka.